> Resource> Flash Drive> Mfe Way hazie Cruzer Fit Flash Drive Iweghachite
Biko Nyere! My Cruzer Fit USB Flash Drive Kwụsị-arụ ọrụ
M nwere 16GB Cruzer Fit USB flash mbanye. Mgbe m na-ele ezinụlọ vidiyo na kọmputa m, na flash mbanye kwụsịrị ịrụ ọrụ ozugbo. M na-agbalị wepụ ya na re-ejikọta ọzọ. Ọ na-egosi dị ka random mbanye akwụkwọ ozi, na gwara m ka m usoro ya. Bụ n'ebe ọ bụla Cruzer Fit flash mbanye mgbake software ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwọta na m nwere ike nweta ihe m foto na vidiyo na azụ ?. Ọ bụla njikọ ma ọ bụ saịtị ma ọ bụ enyemaka ga-adị ukwuu. Daalụ nke ukwuu
Gị ikpe bụ n'ezie a na-enwekarị nsogbu. The data ọnwụ nke na-akpata site formatting bụ n'ezie manụ. Nke bụ eziokwu bụ na ị na-adịghị mkpa-adị oke nchegbu banyere ya. Aga m ịme Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac gị, nke bụ usoro ihe omume na-enyere gị iji naghachi data si Cruzer Fit flash mbanye na ala. A mfe na ngwa ngwa ngwá ọrụ pụrụ inyere gị aka na nke a Cruzer Fit Flash Drive data mgbake nke tupu ị na-ekpebi Ọkpụkpọ flash mbanye.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute si n'okpuru, biko họrọ nri version maka kọmputa gị.
Ndenye Guide nke Cruzer Fit Flash Drive Iweghachite
Wondershare Data Recovery Amama Cruzer Fit Flash Drive Data Recovery n'ime ole na ole clicks. Ugbu a, ka eme ya na Windows version, Mac ọrụ pụrụ ịgbaso yiri ndu na Mac version kwa.
Nzọụkwụ 1 Download Wondershare Data Recovery na wụnye ya na kọmputa gị. Fanye gị Cruzer Fit USB flash mbanye n'ime kọmputa gị mgbe ahụ ẹkedori usoro ihe omume iji weghachite data si Cruzer Fit flash mbanye.
Dị ka oyiyi n'okpuru ngosipụta, ị ga-ahụ ihe interface na 3 mgbake ụdịdị na otu "Wubàtá Iweghachite" nhọrọ. Ebe i nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" apụ.
Nzọụkwụ 2 Iji naghachi data si Cruzer Fit flash mbanye, ị ga-họrọ ike mbanye nke gị Cruzer Fit USB flash mbanye na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu ya.
"Kwado Deep iṅomi" nhọrọ dị kwa. Ị nwere ike na-agbalị a mode na-nkịtị Doppler adịghị chọta gị chọrọ faịlụ.
Nzọụkwụ 3 The faịlụ gị Cruzer Fit USB flash mbanye niile ga na-egosipụta na edemede mgbe Doppler, dị ka "Graphic", "Email", "Video", wdg
Ị nwere ike ịgwa ma faịlụ na ị na-aga na-agbake a hụrụ ma ọ bụ ọ bụghị site faịlụ aha. Mgbe ahụ akara faịlụ ndị ahọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha. Biko họrọ a ebe na kọmputa gị na-ha iji zere ime ka data overwriting.